မောင်စေတနာ: Animal Game
မအားလပ်လို့ Post အသစ်များ ရေးမတင်နိုင်တာ အတော်ပင် ကြာပါပြီ။ မိမိ အပျင်းပြေ ဆော့ကစားနေတဲ့ ဂိမ်းလေးတစ်ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သိတဲ့လူတွေ သိပါတယ်။ Animal Game လေးပါ။ အင်စတောလုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ ပေါ့ပါးပြီး ဆော့ကစားလို့ ကောင်းပါတယ်။
တူညီတဲ့ အကောင်လေးတွေကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ချိတ်ဆက်ပေးရတဲ့ ကစားနည်းလေးပါ။ မျက်စိလျင်မြန်မှု၊ ဥာဏ်ရည် မြင့်မားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့တော့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး။ မျက်စိတော့ တော်တော်ညောင်းပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်ဒီမှာ Download လုပ်ယူပါ။
ရှာနေတာကြာဘီဗျ. ခုမှတွေ့ရတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
မြန်မာဇော်ဂျီဖွန့် နော်က်ဆုံးဗားရှင်း(ရရစ်တို့ အောက်ကမြင့်တို့ ကို တစ်လုံးတည်းရိုက်လို့ရတာလေ)အဲဒါ ဖြစ်နိုင်ရင်လိုချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။
www.zawgyi.net မှာ အမြဲတမ်း update တင်ပေးပါတယ်။
8:08 AM, November 30, 2010
animal game ကို ကစားဖို့ ကျနော့်စက်မှာ install လုပ်တော့ ကျနော့်စက်မှာ msvbvm50.dll ဖိုင် missing လို့ ပြောနေတယ်ဗျာ အဲဒါ ကစားလို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါ
2:00 PM, December 02, 2010
install လုပ်စရာ လုံးဝ မလိုပါ။ ဒီအတိုင်း ကလစ်လုပ်ပြီး ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဘာမှားလဲ ပြန်စစ်ကြည့်ပေးပါ။
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်မစက်မှာလဲ အဲလိုပဲ msvbvm50.dll file is missing လို့ပဲပေါ်နေပါတယ် ....
1:08 PM, December 05, 2010
ီ animal ဂိမ်းကို ဖွင့်လို့မရတာက msvbvm50.dll
file မရှိလို့ပါ. အဲဒါကို တစ်နေရာရာမှာ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး မိမိ စက်ထဲမှာ install လုပ်လိုက်ရင် ဖွင့်လို့ရပါပြီ... :D
2:12 PM, December 09, 2010
လိုနေတဲ့ msvbvm50.dll ဖိုင်ကို ဒေါင်းယူဖို့ လင့်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
4:19 PM, December 09, 2010
ထဲသို့ ထည့်လိုက်ပါ။ ဆော့ကစားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
animal ဂိမ်း ကို ကစားဖို့ လုပ်တာ ကစားမရဘူးဖြစ်နေပါတယ်.. ကစားလို့ ရမဲ့နည်းရှိရင်ပြောပြပေးပါနော်
8:43 PM, March 23, 2013